डिजाइन पछाडि: डिजिटल Telepathy साथ साक्षात्कार
lending8 मा मे 23, 2014 द्वारा लिखित।
हाम्रो नयाँ वेबसाइट को निर्माण को लागी डिजाईन सोच को जाँच गर्नुहोस्!
हाम्रो नयाँ वेबसाइट हाम्रो लागि एमएएफमा प्रेमको श्रम रहेको छ, तर हामी यसमा उत्कृष्ट डिजाइन टोलीबिना उत्पाद वितरित गर्न सक्दैनौं। डिजिटल टेलिपेथी। नेट, ब्रेन्ट, र एडुआर्डोले आफ्नो व्यस्त तालिकाबाट समय निकाल्नको लागि यति राम्रो थियो कि एमएएफको रिब्रेन्ड पछाडि डिजाइन सोच के हो र प्रयोगकर्ताको अनुभवको महत्त्वको बारेमा सबै परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार सिर्जना गर्न हाम्रो मिशनलाई अगाडि बढाउँदै जान्न।
केहि हालको डिजाइन प्रवृत्तिहरू के हुन् जसले तपाईंलाई र टीमलाई प्रेरणा दिन्छन्?
हालसालैको डिजाइन न्यूनतावादतिर बढेको छ। फेसनदार डिजाइनहरू सपाट हुन्छन् र तिनीहरूको अघि भएको भन्दा बढी सेतो ठाउँ हुन्छ।
यो प्रवृत्ति हाम्रो डिजाइनको "सुधार" को लागि हाम्रो सूत्रसँग धेरै मिल्दो छ।
बेटरमेन्ट = सरल + बाध्यकारी - घर्षण
नयाँ MAF र Lending Circles लोगोको साथ आउने प्रक्रिया कस्तो थियो?
धेरै सहयोगी - एमएएफ लोगोका लागि हामीले संस्थाको मूल अवधारणाबाट सुरु गर्‍यौं र कम्पनी सरोकारवालाहरूसँग कार्यशाला प्रारूपमा हाम्रा प्रारम्भिक विचारहरू स्केच गर्न काम गर्‍यौं। हामी प्रत्येक, MAF सरोकारवालाहरू समावेश, विचारका लागि स्केच को एक संख्या योगदान। हामीले सामूहिक रूपमा एक दिशामा निर्णय गरे र हाम्रो डिजाइनहरू त्यहाँबाट सारियो।
तपाइँ कसरी कहानी अनुभव र इन्फोग्राफिक्स उपयोगकर्ता अनुभव मा शामिल गर्नुभयो?
एमएएफसँग बताउन धेरै प्रेरणादायक कथाहरू छन्; संगठनको सफलता सजिलैसँग यसको सदस्यहरु लाई हेरेर देख्न सकिन्छ। हामी एक फोटोग्राफरको साथ बाध्य पार्ने सम्वन्धित इमेजरी उत्पादन गर्नका लागि छौं जसले MAF को कथा भन्नाले ठूलो काम गर्छ। हामीले त्यस्ता डिजाइनहरू सिर्जना गर्न काम गर्‍यौं जुन यी छविहरू प्रदर्शन गर्दछ र साथै म्याफको कारण समर्थन गर्ने तथ्या of्कहरू केही हाइलाइट गर्न केही समर्थन दृष्टान्तहरू पनि सिर्जना गर्‍यो।
तपाईं कसरी एमएएफ जस्तो गैर-नाफामुखी संस्थाहरूको लागि उद्देश्य आधारित डिजाइनमा कसरी पहुँच गर्नुहुन्छ?
उत्तर हाम्रो सेवाको नाम हो - उद्देश्य आधारित डिजाइन। अधिकांश स्थानमा, प्रोजेक्टहरू अन्तमा दिमागमा सुरु हुन्छन् ... टोली "केहि" बनाउन जोडदार काम गर्दछ। हाम्रो सेवा अद्वितीय छ कि हाम्रो प्राथमिक फोकस एक विशेष उद्देश्य हासिल गर्न मा छ।
एमएएफको मामलामा हामीलाई थाहा थियो कि उनीहरू सफल भएको एउटा कारण उनीहरू जहाँ छन् मानिसहरूलाई भेट्ने तिनीहरूको क्षमता हो, तिनीहरूसँग व्यक्तिमा व्यक्तिसित कुरा गर्नु। हामीले यसलाई डिजाइनमा जाँदा मनमा राख्थ्यौं, नेत्रहीन अपील गर्ने केही सिर्जना गर्ने विचारमा र एकै साथ धेरै श्रोताको लागि धेरै पहुँचयोग्य र सीधा तरीकाले बोल्दै।
MAF वा लेन्डिंग सर्कल वेबसाइट डिजाइन प्रक्रियाको एक अविस्मरणीय वा चुनौतीपूर्ण हिस्सा के थियो?
लेन्डिending सर्कल साइटको लागि हाम्रो किकोफ डिजाइन कार्यशाला साँच्चै उत्कृष्ट थियो। हामीहरू एमएएफबाट सरोकारवालाहरू थियौं र उनीहरूको विकास टोलीका सदस्यहरू हाम्रा कार्यालयहरूमा आउँथे। हामी धेरै मैदानहरू ढाक्न सक्षम भयौं किनकि हामीसँग एकै कोठामा सबै सहि मानिसहरू थिए। यो रमाइलोको एक टन थियो, सबैजना विचारहरु को रेखाचित्रमा संलग्न भए र हामी अर्को दुई महिनाको लागि हाम्रो काममा सबै पार्टीहरू बीच प al्क्तिबद्ध हुन सक्षम भयौं। हामीसंग यती राम्रो समय थियो कि हामीले वास्तवमा यसको बारेमा एक ब्लग पोष्ट लेख्यौं!
प्रयोगकर्ताहरू नयाँ साइटहरू भ्रमण गर्दा तिनीहरूसँगै कुन कुरा आउँछ?
हामी वेबसाइट भ्रमणकर्ताहरूलाई कारणसँग जोडिएको महसुस गर्न चाहन्छौं। छिमेकीहरूलाई storiesण घेरा (सामाजिक loansण) को माध्यमबाट छिमेकीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने वास्तविक कथाहरू राख्दा वेबसाइट आगन्तुकहरूले उनीहरूको जीवनमा कसरी भिन्नता ल्याउन सकिन्छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ।
कसरी तपाईं एक वेबसाइट को सफलता मापन?
त्यो एक जटिल उत्तर हो। एक वेबसाइट मार्केटिंग, संचार, PR, आदि को लागि एक उपकरण हो। यसैले वेबसाइटको प्रभावकारिताको यो बाँकी इकोसिस्टमबाट प्रभावित छ। एमएएफ को लागी, दुबै मात्रात्मक मेट्रिक्स (कति आगन्तुक दाता बने) र गुणात्मक मेट्रिक्स (ब्रान्ड सन्देशको प्रभावकारी अनुप्रयोग) छन्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं हामी जस्तै डिजिटल टेलिपेथीद्वारा wWed हुनुहुन्छ। तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् यहाँ!